Obodo na Netherlands n'anya ịnyịnya ígwè ha. Utrecht na-etinye otutu ego na igwe ya akụrụngwa. Long ígwè n'okporo ámá na nnukwu na-adọba ụgbọala ụlọ ọrụ ime ka ọ dị mfe iji anyịnya igwe e.
Antwerp bụ Belgium kasị bike-enyi na enyi obodo, na a mepụtara netwọk nke ịgba ígwè ụzọ. Na nnukwu Ngo iji na rụọ ọrụ na ya n'ihu, Antwerp ga-anọ n'etiti n'elu ịgba ígwè aga Europe.
Munich nwere a doro anya-eme atụmatụ iwu a nke ukwu ígwè netwọk mpaghara ma melite ịgba ígwè akụrụngwa. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ iru a 30% modal òkè maka anyịnya igwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-agbalị si na-gburugburu Munich na a bike, ị nwere ike njem e ụgbọ okporo ígwè si Berlin, Vienna, na Zurich, n'etiti obodo ndị ọzọ.
You dịla njikere ịkwụ ụgwọ ụfọdụ ebe kacha mma na Europe na-eji naanị ịnyịnya ígwè na ụgbọ oloko gị? Jikere maka njem nke a ndụ, na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè n'oge!
#Bike-Friendly #Bikes Igwe kwụ otu ebe enyi na enyi europetravel Train Travel